इन्डियन आइडलका प्रतियोगिले नेहा कक्कडको गालामा चुमेपछि | Nepalisongskhabar.com
केही दिनअघि इन्डियन आइडल-११ को अडिसनका क्रममा प्रतियोगिताकी एक निर्णयक तथा गायिका नेहा कक्कडलाई एक जना प्रतियोगिले अभद्र व्यवहार गरे । अडिसन दिन आएका ती प्रतियोगिले जबर्जस्ती नेहाको गालामा चुम्बन गरे । प्रतियोगिको उक्त दुव्यर्वहारले प्रतियोगिताका निर्णयक तथा कार्यक्रम सञ्चालकलाई मात्र होइन, नेहा स्वयं समेत आश्चर्यचकित भइन् । उक्त घटनाको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । त्यसपछि उक्त घटना चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
उक्त घटनाका बारेमा प्रतियोगिताका अर्का निर्णयक विशाल डाड्लानीको भनाइ बाहिर आएको छ । विशालले आफ्नो ट्वीटरमार्फत उक्त घटनाका बारेमा मुख खोलेका हुन् । वास्तवमा विशाललाई ट्याग गर्दै आयुष्मान नामका एक व्यक्तिले ट्वीट गर्दै ‘त्यो केटालाई झापड हान्नु पथ्र्यो । उसले त्यस्तो गर्ने हिम्मत नै कसरी गर्‍यो ? मलाई आशा छ तपाईंहरुले उसलाई त्यसै जान दिनु भएन होला ।’
उक्त ट्वीटलाई जवाफ दिँदै विशालले लेखेका छन्-‘मैले त प्रहरीलाई नै बोलाउनु पर्छ भनेर सल्लाह दिएको थिएँ, तर नेहाले ती युवकलाई छाडिदिने निर्णय गरिन् । उसलाई वास्वतमै मनोेवैज्ञानिक सहयोगको आवश्यकता छ । अब हामीले गर्न सक्ने भनेको उसको उपचार हो ।’
सोनी टेलिभिजनले आफ्नो इन्स्टाग्रँममा उक्त घटनासंग सम्बन्धि एउटा भिडियो शेयर गरेको थियो । जसमा थुप्रै व्यक्तिहरु अडिसनका लागि आएका थिए । त्यसै क्रममा एक व्यक्ति राजस्थानी पहिरनमा सजिएर आफ्नो हातमा नेहाका लागि थुप्रै वटा उपहारहरु लिएर आए ।
नेहा जब उनलाई भेट्न गइन्, त्यसपछि ती युवाले नेहालाई आफूलाई चिनेको हो ? भन्ने जिज्ञासा राखे । त्यसपछि नेहाले ती व्यक्तिलाई मायालु पाराले अंगालो हालिन् । त्यहि बेला ती प्रतियोगिले नेहाको गालामा चुम्बन गरिदिए । त्यो दृष्य देखेर कार्यक्रमका सञ्चालक आदित्य नारायण झा तथा निर्णयक अनु मलिकसहित त्यहाँ उपस्थित सबै आश्चर्यमा परे ।
“भाबि अध्यक्षको दाबेदार रमेश बि.जी को स्टाटसमा आलोचनाको खोइरो” यस्तो छ कारण
गायक अजय नगरकोटीको आवाजमा “ स्वाथी पनमा” हेर्नुहोस भिडियो सहित
गायिका बविना किराँतीको आवाजमा ”नाचौं छम छमी“ भिडियो सहित